Prototype azo ampiasaina | Working Prototype - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
FAMPIHARANA / Fitsapana miasa
Ny prototyping mandeha ho azy alohan'ny famokarana betsaka dia manampy amin'ny faneriterena ny fotoana sy ny vidinao amin'ny fitondrana vokatra vaovao eny an-tsena, mifanentana tanteraka amin'ny endrikao ary maneho tsara ny endrika faran'ny vokatra farany, mety sy miasa.
Mifantoka amin'ny fananganana prototypes mahomby i Createproto - na dia sarotra aza ny tetik'asa misy anao, dia manana vahaolana ho anao hatrany izahay.
Andramo ny volavolanao amin'ny Form Fit & Function
Rehefa mandeha ny volanao dia mila manana prototypes miasa haingana ianao miaraka amin'ny endri-javatra anatiny ho an'ny fizahana form form fitiliana sy ny fitsapana miasa, izay manampy amin'ny fanombanana ny famolavolana, ny fitaovana, ny tanjaka, ny fandeferana, ny fivoriana, ny mekanisma miasa ary ny famokarana.
Ireo prototypes miasa dia afaka manampy amin'ny fanaporofoana sy amin'ny fomba tonga lafatra ny volavolanao amin'ny tranga fitsapana henjana. Amin'ny alalàn'ny prototypes vita amin'ny fitaovana enti-teknika amina karazana teknolojia hafa dia azonao atao ny manambara ny fomba fampisehoana ny vokatra alohan'ny famokarana tsena.
Raha ny marina, ny fananganana prototypes miasa na miasa dia tena ilaina ary tokony ho raisina ho dingana ilaina mandritra ny fizotran'ny New Product Introduction (NPI). Matetika izy io dia raisina ho toy ny "Politikan'ny fiantohana" alohan'ny hanolorany tena amin'ny famokarana betsaka.
Ireo prototypes miasa izay mifanentana amin'ny vokatra farany
Mampiasà fitaovana mitovy amin'ny vokatra farany, alaivo sary an-tsaina ny fiasan'ny mekanika, ny fanoherana simika, ny toetran'ny vokatra farany ampiasaina.
Mamorona prototype sarotra kokoa amin'ny mekanika miasa hijerena endrika sy mety, ary hiantohana ny faritra rehetra ao anaty fivoriambe.
Mamorona prototypes miasa tsy miangatra avo lenta handrefesana, hampitahana, na hijerena ireo lesoka amin'ny famolavolana, ny fahasamihafana misy eo amin'ny lafiny sy ny fandeferana azo ekena.
Ireo prototypes optique optique dia miasa manohana ny fizahana injenieram-pampandrosoana fotometrika, ao anatin'izany ny fifindran'ny optika, ny index bias ary ny transmittance, sns.
Mampiasa add-inserts, hinge mivantana, na overmolds mba hanahaka ny fiasan'ny vokatra sy ny fampifangaroana ireo simulation ireo ho prototype iray miasa izay mandeha toy ny vokatra farany.
Ny fananganana prototypes miasa dia fomba iray tsara hanandramana haingana ihany koa ny famaranana, ny firafitra ary ny fahatsapana akora samihafa amin'ny vokatrao farany.
Mioty ny valisoa avy amin'ny Prototype iray miasa
Alohan'ny hamokarana betsaka dia zava-dehibe ny famoronana prototypes azo ampiasaina mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny antenainao, ny fahaizanao ary ny fenitra indostrialy ny volavolanao.
Fitsapana ny famerenana ny famolavolana drafitra ary ahitsy ny fahombiazan'ny vokatrao.
Amboary sy tanteraho ny vokatrao mba hahafahanao miroso amin'ny famokarana feno fahatokisana.
Ampitao haingana amin'ny mpandray anjara ny hevitra; manaporofo ny sandan'ny foto-kevitra ho an'ny mpampiasa vola sy mpanjifa mety.
Avelao ny olana rehetra ho hita sy ahitsy alohan'ny hanaovana fitaovana famokarana lafo vidy.
Hamarino fa azo atao ny manamboatra tetikasa; ataovy haingana mankany amin'ny tsena ny vokatrao amin'ny vidiny mirary.
Fampiasana ny haitao prototyping mety hanamboarana ny famokarana
Amin'ny herinay rehetra hiantohana ny fahombiazan'ny tetikasanao
Ny CreativeProto dia mampiasa teknolojia sy fitaovana maro karazana miaraka amina fomba nentim-paharazana mba hamoronana prototypes miasa marina sy amin'ny antsipiriany. Ao amin'ny CreateProto, manolotra karazana vahaolana fampandrosoana ny vokatra izahay hanampiana ireo mpamorona, injeniera ary mpanamboatra hamolavola sy hanombatombana haingana ny vokatra vaovao, ara-toekarena ary atahorana ambany.
Miaraka amin'ny haitao mandroso haingana momba ny prototyping dia azontsika atao ny mamadika ny endrikao ao anatin'ny andro vitsivitsy. Hahazo torohevitra matihanina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao, na amin'ny endrika fanandramana, na prototypes mety sy miasa, na ho fiandohana ho an'ireo serivisy fanamboarana any ambanivohitra any aminay. Izany dia hanampy amin'ny fahazoana angon-drakitra avo lenta amin'ny fanandramana fampiasa anao ary hitondra fahatokisana amin'ny fanamarinana.
Amin'ny maha-mpanamboatra prototype manokana azy dia nifantoka tamin'ny famokarana prototyping nandritra ny fotoana ela i CreateProto ary nahazo laza tsara tamin'ireo faritra niasa. Afaka manome anao prototypes mahafa-po namboarina tamin'ny fomba mety indrindra izahay na inona na inona amin'ny milina CNC, fanariana fantsona na fitaovana haingana amin'ny bobongolo aluminium.
Ny machining CNC dia matetika ampiasaina amin'ny famokarana prototypes miasa sy faritra famokarana, ilaina amin'ny fampandrosoana ny vokatra sy ny injeniera. Izy io dia dingana iray amin'ny "famokarana reductive", fananganana fitaovana milina azo programmable sy automatique hanamboarana sombin-by na plastika amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fitaovana miaraka amin'ny fikosoham-bary, fanodinana na fitotoana fehezin'ny solosaina. Ity fomba nentim-paharazana ity dia mamokatra tanjaka sy famaranana ambony noho ny teknolojia prototyping hafa.
Ny machining cnc dia manome safidy an-tsekoly isan-karazany amin'ny sokajy injeniera, mamela ny prototype miasa hanana fananana ilaina ary koa manome antoka ny fandeferana refy. Noho izany, ity no fomba tsara indrindra hitsapana ny prototype an'ny form fit and function.
Ny fanariana vacuum dia matetika ampiasaina amin'ny famokarana prototypes miasa miaraka amina andiany kely (10 ka hatramin'ny 50 kopia). Amin'ny ankapobeny, ny bobongolo dia vita amin'ny silipo silipo ary mampiasa ampahany CNC na SLA ho modely maoderina. Ireo bobongolo ireo dia mamerina antsipiriany sy firafitra ary manome famaranana tsy miova avy amin'ny faritra iray mankany amin'ny manaraka.
Ny karazana polyurethanes misy fananana ara-batana samihafa dia manome ny prototypes amin'ny fanandramana miasa amin'ny toe-javatra samihafa, anisan'izany ny enta-mavesatra, ny enta-mavesatra ary ny fitsapana azo antoka hafa. Azonao atao ihany koa ny mahazo valiny toy ny famokarana ao anatin'izany ny loko, ny famaranana, ny endrika ary ny fahatsapana malefaka. Haingam-pandeha kokoa izy amin'ny famoronana ampahany amin'ny famokarana andiany kely sy sarotra noho ny amin'ny bobongolo nentim-paharazana sy ny tsindrona tsindrona, ary hanatsara ny fahaizanao mivoatra.
Fitaovana haingana amin'ny bobongolo aluminium
Fitaovana vita amin'ny aliminiana haingana dia fomba haingana sy mahomby amin'ny famolavolana plastika; tsy vitan'ny fanamboarana prototypes fitsapana miasa an-jatony maro eo akaikin'ny vokatra farany ihany, fa manome ihany koa ny famokarana ampiasain'ny faritra farany ampiasaina amin'ny famokarana ambany.
Ny famolavolana haingana dia manome safidy tsara kokoa ho an'ireo mpanjifa mila faritra fanandramana ambany. Mandritra izany fotoana izany dia ho afaka hampifandray ny elanelana misy eo amin'ny prototype sy ny famokarana izy, hamita haingana kokoa ny fanandramana miasa sy endrika endrika anao, hamela anao hampiseho ny mpanjifa mety ho vokatra vita farany, ary avelao ny olana rehetra ho hita sy ahitsy. talohan'izy ireo nafindra tamin'ny famokarana.
Ny fampitaovana haingana dia matetika lafo kokoa noho ny lasitra famokarana noho ny haingananainganana amin'ny fananganana sy ny fotoana fohy kokoa, noho izany ny fiovana famolavolana miolakolaka matetika dia lafo kokoa.
Prototyping haingana, Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana,